Hazakaza-tsoavaly : Ny pmu Bet sisa no afaka mitrandraka ireo hazakazaka frantsay eto Madagasikara
05/04/2018 admintriatra 0
Taorian’ny olana nisy teo amin’ny ACHEL na ny sampandraharaha manana fahefana mpikarakara momba ny soavaly ho an’ny hazakazaka sy ny fiompiana eto Madagasikara sy ny PMU Madagascar, dia nivoaka ny 30 marsa 2018 teo ny …Tohiny
Nanana ny lazany tany amin’ny taona 2000 tany. Hankalaza ny faha-20 taonany amin’ity taona ity ny tarika Ndondolah sy Tahiry. Hiatrika izany ary ho avy ny tapak’ity volana avrily ity i Tahiry, izay miasa sy …Tohiny
Rivo Rakotovao : “Fomba maneran-tany ny fihaonana amin’ny olom-boafidy”
Niteraka resa-be ny fihaonan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier amin’ireo depiote teny amin’ny Hotel Le Paon d’Or, Ivato. Araka izany, nitondra fanazavana ny filohan’ny antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, fa fomba fanao maneran-tany izany fihaonan’ny lehiben’ny governemanta amin’ireo …Tohiny
Antenimieram-pirenena : Nankatoavin’ny depiote fanindroany ny ZES
Raha efa nankatoavin’ny parlemantera teny amin’ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny “Zones économiques spéciales” na ZES, dia notsipahin’ny teny amin’ny antenimieran-doholona izany, ary naverina nohitsiana sy nolaniana indray. Tsiahivina fa ny 8 novambra 2017 izany …Tohiny
Tsy araka ny nieritreretan’ny CFM, sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy ny zava-nisy tetsy Anosy omaly, nandritra ny fanaovan-tsonia ny dina sy fitsipi-pitondrantenan’ireo kandidà. Azo lazaina fa nampiseho tsy firaharahiana mihitsy ireo kandidà sasany, ary teo ihany ...Tohiny
Zafy albert : Noraisin’ ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana azy